theZOMI: Burma News International - April 25, 2013
Burma News International - April 25, 2013
Aid group warns Shan movement with aid suspension
Loi Taileng — Nippon Foundation, the Japanese organization that has been active in Burma’s peace process since early last year, has warned the Thai-border based Restoration Council of Shan State / Shan State Army (RCSS/SSA) that further aid to the group would be reviewed if it refuses to participate in the activities of the United Nationalities Federal Council (UNFC), according to insider sources from the RCSS/SSA.
Ongoing armed conflicts,aflaw in Constitution: Shan rights group
A rights report on 22 April by the Shan Human Rights Foundation (SHRF) claims that the ongoing clashes between ethnic armed groups and Burma army are due toaflaw in the 2008 constitution that grants an authoritative power to the armed forces over the presidency, in which the former may abuse its power by passing the presidential authority.
Shan movement prepares for political parley
Loi Taileng — The Shan State Army (SSA) South held an ad hoc meeting on Tuesday, 23 April, at its Loi Taileng base, opposite Maehongson’s Pang Mapha district, to discuss preparations for political dialogue with Naypyitaw.
A senior representative at Britain’s Foreign Office said the UK government welcomes the decision by EU ministers to lift the remaining sanctions on Myanmar while retaining an embargo on weapons sales.
Kyodo News Agency opened its first branch in Yangon on Tuesday after signingamemorandum of understanding with the News and Periodicals Enterprise of Myanmar’s Ministry of Information, state media reported on Wednesday.
The Matupi Women’s Association (MWA) was formed in Matupi Town, the second capital of Chin state, Burma on 14 April.
Rights Groups condemn EU’s decision to end Burma sanctions
International rights groups, including Human Rights Watch and Burma Campaign UK, have criticised the EU for lifting its sanctions on Burma, saying that the move “undercuts” the impoverished country’s human rights progress.
Ethnic alliance criticizes EU for lifting its sanctions
The United Nationalities Federal Council (UNFC) warned the European Union that it was too early to lift sanctions on Burma. The UNFC hit out at the EU after foreign ministers from 27 European countries met in Luxembourg on April 22 and decided to lift all sanctions on Burma, except its embargo on arms.
၂၀၁၃ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ BNI ၀ိုင်းတော်သားတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသတင်းလွှာ ရေဒီယို အစီအစဉ်
၁။ တရုတ်ကုမ္ပဏီ CNPC ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူ ၁၀ ဦးကို ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူခရိုင် ရဲမှူးကြီးကနေ ခံဝန်ချုပ်နဲ့ ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၂။ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) ကယားပြည်နယ်မှာ ဒေသခံလူထုတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲပြု လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာနဲ့။
၃။ ကယားပြည်နယ်အတွင်း အမှတ် ၁၄ တန်းမြင့်စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းအတွက် မြေယာသိမ်းဆီးမှု အခြေအနေတွေကိုကြားကြရမှာပါရှင်။
အမေရိကန်မှာ ကရင်နီရိုးရာကေးထျိုးဘိုး ပွဲတော်ကျင်းပ
ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ တနှစ်တခါ ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ကေးထျိုးဘိုးခေါ် တံခွန်တိုင် ပွဲတော်ဟာ ကရင်နီအမျိုးသားတို့ရဲ့ သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုကို ဖေါ်ညွှန်းစေတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်ရောက် ကရင်နီလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောပါတယ်။
ဘားအံမြို့ အနီးတစ်ဝိုက် သောက် သုံးရေ ပြတ်လပ်သည့် ကျေးရွာများသို့ စုပေါင်းရေလှူဒါန်း
နွေရာသီအတွင်း အပူချိန်မြင့်တတ်မှုကြောင့် ဘားအံမြို့ အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်နေ သည့် ကျေးရွာများသို့ ဘားအံမြို့ မိမြို့ဖအချို့နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ ဦးဆောင်၍ ယမန်နေ့(ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့)က စုပေါင်းရေသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေဆဲကာလတွင် ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအချို့တွင် ကရင်နယ်ခြား စောင့်တပ်-BGF မှ ဒေသခံများကို အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများ ပြုလုပ်နေသေးကြောင်း ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့(KHRG)က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အာဆီယံ ဒေသအတွင်း ကူးစက်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်ရောဂါများ ထိန်းချူပ်ရန် မှတ်တမ်းပြုစုမည်
အာဆီယံဒေသတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှု ကျွမ်းကျင်သူများ အဖွဲ့က ကူးစက်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် ရောဂါများကို စီမံထိန်းချုပ်နိုင်ရန် မှတ်တမ်းများ စတင်ပြုစုတော့မည်ဟု အာဆီယံ NCD ( Non Communicable Disease) ၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ အရသိရသည်။